Leísmo kunye nokusetyenziswa kwe 'Le' ngesiSpanish
Leísmo kunye nokusetyenziswa kwe 'Le'
'Le' Ngokuqhelekileyo izigatshana ze 'Lo'
Ngaba uhlala ulandela imigaqo "eyiyo" yesiNgesi ngokuthetha nokubhala kwakho? Mhlawumbi akunjalo. Ngoko mhlawumbi kuya kuba nzima ukucela izikhulumi zaseSpain zenza okufanayo. Kwaye kunjalo ngokwenene xa kuziwa ekusebenziseni izivakalisi ezifana ne- le na.
Xa kuziwa ekuphula imithetho yeSpanish - okanye ubuncinane behluka kwiSpeyin efanelekileyo - mhlawumbi akukho mithetho ephukile kaninzi kunezo zinto ezibandakanya izibhengezo zezinto zesithathu .
Imithetho iyaqhekeka kaninzi ukuba kukho amagama amathathu aqhelekileyo okuhluka kwizinto ezijongwa njengesiqhelo, kwaye iSpanish Royal Academy (i-arbiter esemthethweni yeyona nto ifanelekileyo yesiSpeyin) iyamkela ukuhluka okuqhelekileyo kwimiqathango kodwa kungabikho abanye. Njengomfundi waseSpeyin, ngokuqhelekileyo ulunge ukufunda, ukwazi nokusebenzisa iSpanishi epheleleyo; kodwa kufuneka uqaphele ukutshintsha ukuze bangakudibanisi kwaye, ekugqibeleni, ngoko uyazi ukuba kukulungele ukuphuka kwizinto ozifundayo eklasini.
I-Spanish Standard kunye neProject Pronouns
Ishati engezantsi ibonisa izivakalisi ezijoliswe kumntu wesithathu ezicetyiswa yi-Academy kwaye ziqondwa ngabathethi beSpeyin yonke indawo.
Inani kunye nesini Into ngqo Ukuchithwa ngqo
ngumbutho wesinye ("yena" okanye "it") Yabona ( Yabona. Ndiyambona okanye ndiyibona.) Le ( Le escribo la carta. Ndimbhalela ileta.)
linye iqela lomfazi ("wakhe" okanye "lona") La ( I-veo. Ndiyambona okanye ndiyibona.) le ( Le escribo la carta. Ndiyibhala loo leta.)
ubuninzi besilisa ("bona") los ( Losoo. Ndiyabona.) i ( Les escribo la carta. Ndiyabhalela ileta.)
ubuninzi besifazana ("bona") las ( Las veo. Ndiyabona.) i ( Les escribo la carta. Ndiyabhalela ileta.)
Ukongezelela, i-Academy ivumela ukusetyenziswa kwe- le njengezinto ezizodwa ngokubhekiselele kumntu wesilisa (kodwa akukho nto). Ngaloo ndlela " ndiyambona " inokuguqulelwa ngokufanelekileyo ngokuthi " lo veo " okanye " le veo ." Ukufakela le ngoku kwaziwa kuthiwa yi- leísmo , kwaye oku kuvela endaweni eqhelekileyo kwaye kukhethwa kwiindawo zaseSpain.
Ezinye iintlobo zeLeísmo
Ngelixa i-Academy iyayibona le nto njengento enye ecacileyo xa ibhekisela kumntu wesilisa, akuyena kuphela uhlobo lwe- leísmo onokuva . Nangona ukusetyenziswa kwee njengezinto ezichanekileyo xa kubhekiswa kubantu abaninzi kuncinci, kudla ngokuphindaphinda kusetyenziswe kwaye kubhalwe njengenguqu yeengingqi kwezinye iibhalo zelwimi nangona oko i-Academy ingayithetha. Ngaloo ndlela uva "i -veo " (ndiyabona) xa kubhekisela kwindoda (okanye iqela elidibeneyo lendoda / ibhinqa) nangona i-Academy yayiza kuyibona kuphela i- veo .
Nangona ingaqhelekanga kunokuba yeyiphi enye inguqu ekhankanywe apha ngasentla, kwezinye iindawo nazo zingasetyenziswa njengento echanekileyo endaweni ye- la ukubhekisela kubasetyhini. Ngaloo ndlela, " le veo " inokuthi kuthiwa " Ndiyambona " okanye " Ndiyambona ." Kodwa kwezinye iindawo ezininzi, ukwakhiwa okunjalo kunokungaqondwa kakuhle okanye ukudala ukungalungi, kwaye mhlawumbi kufuneka ugweme ukuyisebenzisa xa ufunda iSpanish.
Kweminye imimandla, le ingasetyenziselwa ukubonisa intlonipho xa isetyenziswe njengento echanekileyo, ngakumbi xa uthetha nomntu. Ngaloo ndlela, umntu unokuthi " ukuzithiba kukubonile " (ndifuna ukukubona) kodwa " query verlo Roberto " (ndifuna ukubona uRobert), nangona -nokuba iza kuthiwa zichaneke kwiimeko zombini.
Kwiindawo apho unakho ukufaka endaweni yeli (okanye nokuba yi- la ), isoloko ivakalisa "ngaphezulu" kwindlela ehlukile.
Ekugqibeleni, kwezinye iincwadi kunye neetekisi ezidlulileyo, unokubona ukuba isetyenziselwa ukubhekisela kwinto, ngoko " le veo " ngokuba "ndiyibona." Namhlanje, nangona kunjalo, oku kusetshenziselwa ukuxhomekeka.
Loísmo kunye neLaísmo
Kweminye imimandla, iinxalenye zeCentral America kunye neColombia ngokukhethekileyo, unokuva oko kunye nokusetyenziswa kwezinto ezichanekileyo endaweni ye- le . Nangona kunjalo, oku kusetshenzwa kwezinye iindawo kwaye mhlawumbi kungcono ukulingiswa ngabantu abafunda iSpanish.
Ngakumbi malunga nezinto
Ukwahlula phakathi kwezinto ezichanekileyo kunye ezingangqaliyo akunjalo ngokufanayo ngesiSpanish njengoko siNgesi, kwaye ngoko ke izimelabizo ezizimelayo ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba zizimelabizo zokumangalela kunye nezidakamizwa, ngokulandelanayo. Nangona uluhlu olupheleleyo lweemeko phakathi kwezinto zesiNgesi neSpain zingaphezu kweli nqaku, ku funeka kuqatshelwe ukuba ezinye izenzi zisebenzisayo (into engekho ngqo) izivakalisi apho iNgesi izakusebenzisa into ngqo.
Esinye isenzo esiqhelekileyo sinje gustar (ukukholisa). Ngaloo ndlela sithetha ngokuthekileyo " le gusta el carro " (imoto iyamkholisa), nangona inguqulelo yesiNgesi isebenzisa into ngqo. Ukusetyenziswa okunjalo kwe- le akukona ukwephulwa kwemithetho esemthethweni yeSpeyin okanye umzekelo wenene we- leísmo , kodwa kunoko kukho ukuqonda okuhlukileyo kwindlela ezinye izenzi zisebenza ngayo.
Yiyiphi iNombolo engabonakaliyo?
I-French Preposition 'Contre': Indlela yokuSebenzisa ngayo
Iintetho nge 'Hacer'
Iilwimi zesiTaliyane: ICelebrare
Y: I-Adverbial Pronoun ejongene neengxelo zeNgaphambili
Indlela yokudibanisa "I-Chasser" (ukuya kuHunt)
Ziziphi "iibhokhwe" ezimbini zesiJamani?
Iimpawu ezibhekiselele kwiiNgxenye zeCandelo
Ixesha elidlulileyo kwiFrentshi
Iimoya ezingenzi kakuhle kwiSpanish
I-Latest kwi HTML Frames
IGalvanic Cell Example Problem
Iingcebiso kubafundi abatsha be-MBA
Iikholeji eziphezulu zaseTexas
Inversion kwizivakalisi zesiNgesi
Iimfihlo ze-Insider ze-TKTS Booth
Indlela Yokunquma / Ukukhupha i-crossbow usebenzisa i-Rope Cocking Aid
Izinto ezili-10 zokumazi malunga ne-2017 ye-Mercedes-Benz E-Class
Ngaphambi kokuba Uhlole